India's online Apple Store inovhura madhoo ayo | Ndinobva mac
India's online Apple Store inovhura madhoo ayo
Kunge Apple yakanga yazivisa mazuva mashoma apfuura, iyo Cupertino-based kambani chete kuvhura zviri pamutemo magonhi virtual kubva kuApple Chitoro muIndia, Chitoro cheApple uko munhu wese munyika anogona kutenga chimwe nechimwe chezvigadzirwa izvo Apple parizvino zvinopa pamusika.
Apple yakatarisana nezvipingamupinyi zvakasiyana usati wakwanisa kuvhura chitoro chepamhepo, senge zvirambidzo zvehurumende zvine chekuita nezvigadzirwa (30% yezvigadzirwa inofanirwa kugadzirwa munyika) nemitemo inogumira kupinza nekutengesa kunze kwenyika, zvirambidzo zvakabvumidza kuwedzera kwekudyara kwepasi rose mu nyika.
India itsva online Apple Chitoro inopa huwandu hwakazara hwezvigadzirwa iyo Apple parizvino iri mumusika kuwedzera kune ese mamwe masevhisi akadai seApple Arcade, Apple Music, iCloud ... Kuvhurwa kwechitoro ichi idanho rekutanga reApple kuti ikwanise kuzvisimbisa munyika kuburikidza nezvitoro zvepanyama. , kunyangwe hazvo ichave kusvika kunonoka 2021 apo iyo Cupertino-based kambani inogona kuvhura chitoro chekutanga.
Sezvo pasina zvitoro zvinooneka, Apple nyanzvi dzinowanikwa online kubatsira vatengi nemaodha avo, pavanogadzira zvigadzirwa zvavo, vachizivisa nezve zvigadzirwa ... Iyo nyowani Apple Chitoro inowanikwa muChirungu neHindi, mitauro miviri yepamutemo munyika.
Kudzikiswa kwevadzidzi, senge sarudzo dzemari dzatinogona kuwana mune dzimwe nyika, dzinowanikwawo muIndia, sezviri chirongwa chekuchinjana michina (ivo vanongogamuchira iPhone, Samsung uye OnePlus panguva ino). Hukama hwaApple neIndia hwakatanga makore anodarika makumi maviri apfuuraZvisinei, pakanga pasati papfuura makore matatu apfuura apo Cupertino akafunga kudyara munyika nekuvhura zvitoro zvavo uye kutamisa chikamu chezvavakagadzira kuenda kunyika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » India's online Apple Store inovhura madhoo ayo
Patricia Arquette ku Star muNew Apple TV + Series "Yakakwira Denga"
Tumira zvemukati kuMac yako kuburikidza neAirPlay neyemahara 5KPlayer app